Reader Of Dhamma
ပထဝီဇယ မေတ္တာလမ်းစဉ် အကျင့်စခန်းနှင့် ပထဝီဇယ မန္တန်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း - 👉ပထဝီဇယ မေတ္တာလမ်းစဉ် အကျင့်စခန်းနှင့် ပထဝီဇယ မန္တန်အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း👈 👉“မန္တန်” ဟူသောစကားမှာ သက္ကတ “မန္တြ” ဖြစ်၍ ပါဠိပြန်ဆိုလျင် “မန္တ” ဖြစ်ပါတယ်...
ဒမ္ဘူလရွေကျောင်း၊၊ ၊၊ - လင်္ကာတမန်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာဆရာတော်များ၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ (2016)ခုနှစ် မဂ္ဂဇင်းအဖုံးကို ဒမ္ဘူလတောင်ဓာတ်ပုံဖြင့် ပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ ဒမ္ဘူလတေ...
ဓမ္မဘေရီဆရာတော်တရားပွဲတိုက်ရိုက်နာယူနိုင် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ပေါ့တလန်မြို့၊ သိရီမင်္ဂလာကျောင်းမှာ ၂ဝ၁၆-ခု၊ စက်တင်ဘာလ(၂၂)ရက်၊(၂၃)ရက်၊ (၂၄)ရက်၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေနေ့ည (၈)နာရီ...
Ko htunhlaing's Dhamma darna
Vimuttisukha ( ၀ိမုတ္ထိသုခ)
အရှင်ရေ၀တ ( ဖားအောက်တောရ )
အရှင်ဝိစိတ္တ ( ကိုးရီးယား )
ပန်းသတင်း နှင့် The Yangon Time
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၇) ရုံးသုံးဘာသာစကာ...
ဒိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၅) ဓမ္မနှင့်ညီညွတ်သော...
ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး ဓမ္မအသိဥာဏ်တိုးပွါး၍ အေးချမ်းကြပါစေ~~~
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၇) ရုံးသုံးဘာသာစကား များသောနုိုင်ငံ
ဆက်လက်၍ အေဒီ (၁၃) ရာစုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော
ဘုရားကျောင်းကြီးသည်မြင့်လည်းမြင့်မားသည်။ ကျယ်လည်းကျယ်ပြန့်သည်။ အတွင်းအပြင်စီချယ်ထားသောပန်းချီလက်ရာများ၊ ထုလုပ်ထားသောပန်းပု
အနုပညာလက်ရာများသည် လည်းပြောင်မြှောက်လှသဖြင့် ကြည့်ရှုလေ့လာရသည်မှာ
အရသာတွေ့လှသည်။ အနုပညာကုိုနားမလည်သော်လည်း နားလည်သလုို
ခံစားကြည့်ရင်းအရသာတွေ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်တွင်
၎င်းနောက် Gellerery သုိ့သွားရောက်ကြသည်။ Gellerery သည်ရှေးဟောင်း
စားသောက်ဆုိုင်တွင် စားသုံးသူများပြည့်နေခြင်းမှာလည်း ဤ Gellerery အမျိုးသမီးချောကြီး၏ရုပ်ရည်တင့်တယ်မှုနှင့်ဧည့်ခံကောင်းသော
“ ငါ၏ရဟန်းအဖြစ်သည် မိသားစုသံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးမှကင်းလွတ်သည်ဟု
ဆန္ဒကုိုချိူးနှိမ်မျိုသိပ်ရသောအနေအထားမျှသာရှိပါသေးလား” ဟုလည်းကုိုယ့်ကုိုယ်ကုိုဆင်ခြင်သည့်အတွေးစများလည်း ဝင်လာသေးသည်။
Antwerp river ဆိပ်ကမ်းသုို့ရောက်ကြသောအခါ တုိုက်ခတ်လာသောလေသည်
တဟူးဟူးတုိုက်ခတ်နေသည်။ သုို့ဖြစ်၍ အမှတ်တရဓါတ်ပုံများကုို
ခပ်သုတ်သုတ်ရုိုက်၍ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ညနေ (၆) နာရီတွင်
မိမိတုို့တည်းခုိုရာ Colombus hotel သို့ပြန်ရောက်ကြသည်။
အဆုိုပါဟော်တယ်ကုိုပုိုင်ဆုိုင်သူမှာ Antwerp မြို့ တွင်နေထုိုင်သော ရွှေပြည်မှ
ကုိုဇင်မင်းထွန်း မဂျုးဂျုးမိသားစုဖြစ်သည်။ သူတုို့သည် ထုိုဟုိုတယ်ကုိုပုိုင်သည်သာမက ဘားဆုိုင်လည်းဖွင့်ထားသည့်ပြင် ကားနှစ်စီးသုံးစီးပင်ပိုင်ဆုိုင်လုိုက်သေးသည်။
မတိမ်းမယိမ်းသာဖြစ်နေသည်။ ရာသီဥတု၊ ရေမြေသဘာဝတောတောင်နှင့်
ထုို့ကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနုိုင်ငံတွင်းသုို့ရောက်သွားသော်လည်း ထူးခြားသောခံစားမှုကုို
မထိတွေ့ရပေ။ ထုို့ပြင် ဒကာကုိုဇင်မင်းထွန်း၏ပြောပြချက်အရ Antwerp မြို့ တွင်
ဂျူးလူမျိုးငါးသောင်းခန့်ရှိသည်။ ဂျုးလူမျိူးတုို့သည် အခြားသူများနှင့်မရောဘဲသီးခြားနေထုိုင်ကြသည်
ဟုသိရသည်။ ဂျုးအမျိုးသားတုို့၏ရုိုးရာလူနေမှုပုံစံမှာ အခြားသူများနှင့်မတူဘဲတမူထူးနေသည်။
ထိန်းသိမ်းထားသဖြင့်ဇာတိမာန် အမျိုးမာန်ရှိသောလူမျိုးဖြစ်သည်ဟု စိတ်ထဲမှတုိုးတုိုးတိတ်တိတ်ကောက်ချက်ချမိသည်။ ထုို့ပြင်
တချိန်ကနာမည်ကြီးမင်းသား ဗန်ဒိန်းသည်လည်း ဘယ်လ်ဂျီယံနုိုင်ငံသားဟုသိရပြန်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ခေါင်းမီးခြုံသောမွတ်ဆလင်အမျိူးသမီးများတော်တော်တွေ့ရသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတော်ပင်များပေလိမ့်မည်။ နယ်သာလန်တွင်လည်း
ခေါင်းမြီးခြုံအမျိုးသမီးများအတော်ပင်တွေ့ရသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် လူဖြူဗုဒ္ဓဘာသာများလည်း
ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဂျာမာန်၊ဒတ်ခ်ျနှင့်ပြင်သစ်ဘာသာအားဖြင့် စကားလေးမျိူးသုံးသည်ဟုသိရသည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကားအများဆုံးသုံးသောနုိုင်ငံတနုိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပင်ဆုိုချင်ပါသည်။
မြို့ တော် Brussel တွင်ကား ပြင်သစ်စကားပြောကြသည်ဟုသိရသည်။
နယ်သာလန်နှင့်နီးသောAntwerp မြို့ တွင်ကား ဒတ်ခ်ျဘာသာစကားကိုအပြောများသည်
ဟုသိရသည်။ ဤမြို့ သည် ဗမာသင်္ဘောသားများအလုပ်လုပ်ကုိုင်သည့်
မျက်နှာများကိုမတွေ့မိခဲ့ပါ။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပူလောင်စွာ
ထုိုနေ့ (၂၁.၁.၁၅) တွင် Antwerp မြို့  ဒကာကုိုဇင်မင်းထွန်း၏ဟုိုတယ်၌
Posted by Wisdom Of Dhamma at Friday, February 06, 20150comments
“ အရှင်ဘုရား နောက်တခေါက်လာလည်လျှင် မတ်လလောက်မှာအရောက်လာပါ။
အဲဒီလမှာတော့နယ်သာလန်ဟာ ကမ္ဘာမှာသဘာဝပန်းမျိူးစုံတွေနဲ့
စီချယ်ထားတဲ့ အလှပဆုံးနုိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုထူးခြားတာက
မတ်လနောက်ဆုံးရက်ပတ်မှ မေလနောက်ဆုံးရက်ပတ်အထိ Leiden မြို့ မှာ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပန်းခြံကြီးဖြစ်တဲ့ “Keukenhof” ဆုိုတာရှိတယ်။
အဲဒီပန်းခြံထဲကုိုဝင်ဖုို့ဝင်ကြေးကတော့ (၁၅) ယူရုိုပေးရတယ်။ ပန်းခြံထဲမှာ
တကမ္ဘာလုံးမှခရီးသွားဧည့်သည့်တွေဟာ တနေကုန်စားကြသောက်ကြရင်း
အပန်းဖြေကြပါတယ်။ ခရီးသွားဧည့်သည်အများစုကတော့ အာရှမှ
အချိန်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒကာကုိုထွန်းအောင်နှင့်ဒကာဆက်မျိုးဦးတုို့မှ
၎င်းနောက် “ အရှင်ဘုရား နှစ်စဉ်နှစ်တုိုင်းဧပြီလ (၃၁) ရက်နေ့ဟာ ဘုရင်မကြီး
Beofrix ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၃) ခုနှစ်အထိအဲဒီဘုရင်မကြီးရဲ့မွေးနေ့ကုို
နှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်မကြီးဟာ သားတော်
(၂၀၁၄) ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ကုို ဘုရင်မွေးနေ့အဖြစ်စတင်
ဘုရင်မမွေးနေ့ကုိုKoninginneday ဟုခေါ်ဆုိုပြီးတော့ ဘုရင်မွေးနေ့ကုို Koningsday
လုို့ခေါ်ဆုိုပါတယ်။ ဟုိုအရင်ကဆုိုရင် ဘုရင်မိသားစုအပြင်သွားရင်
မအောင်မြင်တဲ့နောက်မှာတော့ အစောင့်တွေရှိလာပါတယ်။ ဘုရင်ကုို
ပြည်သူအများစုကလေးစားကြည်ညုိုကြပါတယ်ဘုရား ” ဟု
ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် အချို့နုိုင်ငံများတွင်လူကြည်ညုိုသောဘုရင်တွေရှိကြသေးသည်။
သုို့သော် အများစုမှာ အုပ်ချုပ်သည့်ဘုရင်မဟုတ်ဘဲ အကြည်ညုိုခံရသည့်နုိုင်ငံ့
အချို့ နုိုင်ငံများတွင်ကား တော်ဝင်ဘုရင်မိသားစုနှင့်အစုိုးရနှစ်ခုစလုံးသည် လူထု၏ကြည်ညုိုလေးစားမှုကုိုခံယူရရှိနုိုင်ကြသည်ကုိုတွေ့ရသည်။
သည်မျှသာမကသေး အလုပ်သမားများအတွက်အာမခံချက်ရှိသော လုပ်ငန်းရှင်ကုမ္မဏီများလည်းရှိနေကြသည်။ လူအချင်းချင်းတန်ဖုိုးထားရသော
တွေ့ရသည်။ အမှန်စင်စစ် ဒီမုိုကရေစီစနစ်တွင်လူထုကြည်ညုိုမှသာလျှင်
အစုိုးရဖြစ်လျှင် လူထုကြီးကုိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။
အမှန်စင်စစ် လူထုကြည်ညုိုသောအစုိုးရဖြစ်လျှင် နတ်များလည်းကြည်ညုိုပေမည်။ လူရောနတ်ပါကြည်ညုိုနုိုင်သောအစုိုးရတရပ်ရှိသည်ဆုိုလျှင် ဓမ္မနှင့်
ခေတ်မီဖွံ့ ဖြိုးတုိုးတက်သောနုိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်မည်မှာ ဗေဒင်ဆရာမလုိုဘဲ
အသေအချာသိနုိုင်သည်…. စသည်ဖြင့် ဒကာများ၏ဘုရင်အကြောင်း
၂၁.၁.၁၅ နေ့တွင်ကား ဒကာဦးထွန်းအောင် ဒကာဆက်မျိုးဦးတုို့နှစ်ဦးနှင့်အတူ
နံနက် (၈း၄၅) တွင် Amstelveen မှ ဘယ်လ်ဂျီယံနုိုင်ငံသုို့အလည်အပတ်
အထူးကျေးဇူးတင်မိပြန်သည်။ ဒကာဦးထွန်းအောင်၏ကားလေးသည် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အပူအပင် အခက်အခဲကင်းမဲ့စွာဖြင့် ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းလျှင်မြန်စွာပြေးနေသည်။ လမ်းပေါ်တွင်တိတိကျကျ
ထုို့ပြင် ကားကုိုဘယ်ကွေ့ရမည် ညာကွေ့ရမည်၊ ရှေ့ တည့်တည့်ဆက်မောင်းရမည်၊
ရှေ့ ကီလုိုမီတာဘယ်လောက်တွင် လမ်းခွဲရှိသည်၊ မီးပွိုင့်ရှိသည်၊ မြန်နှုန်းမြင့်လျှင်မှတ်တမ်းတင်မည့်ကင်မရာရှိသည်၊ ဘယ်နှစ်နာရီတွင်
ခရီးဆုံးသုို့ရောက်မည်၊ ဤခရီးကား ဘယ်နှစ်နာရီကြာမြင့်မည်
စသည်ဖြင့်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသောလမ်းညွန်စက်မှ အသေးစိတ်ပြောပြနေသဖြင့် ကားသမားအဖုို့ပုို၍သက်သာပြီးခရီးသွားများအတွက်အဆင်ပြေလှသည်။
နယ်သာလန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသည် ဝဲယာတဖက်စီတွင် (၅) လမ်းသွား
လမ်းမကြီးဖြစ်သဖြင့် ကြီးမားလှသည်။ နှစ်ဖက်ပေါင်းလျှင် (၁၀) လမ်းသွား
လမ်းမကြီးဖြစ်သည်။ လမ်းအကျယ်သည်ဤမျှသာမကသေး၊ ဝဲနှင့်ယာနှစ်ဖက်
စလုံးတွင် အရေးပေါ်လမ်းကုိုလည်းထည့်သွင်းဖေါက်လုပ်ထားသဖြင့် အရေးကြီးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း လမ်းပိတ်ဆုို့မှုမဖြစ်နုိုင်တော့ချေ။
ထုို့ပြင် လမ်းမကြီးသည် အဖုအထစ်အချိုင့်အခွက်တုို့ကင်းစင်လျှက်
ကီလုိုမီတာ (၁၂၀၊ ၁၃၀) လောက်မောင်းနေသော်လည်း မြန်သည်ဟု
ထင်ရှားလေသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနုိုင်ငံရောက်သည်အထိ ဟုိုင်းဝေး
လမ်းမကြီးတလျှောက် အကြားအပျောက်မရှိဘဲ လျှပ်စစ်မီးတုိုင်များ
အပြည့်တပ်ဆင်ထားသည်။ လျှပ်စစ်မီးကုိုပြည်သူအတွက် အဖက်ဖက်မှ
မကြားဘူးချေ။ လမ်းတလျှောက်တွင် ရှုမဆုံးသောမြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီး
နံနက် (၁၀း၄၅) မိနစ်တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံနုိုင်ငံသုို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အပေါက်အပြဲလေးများ ဖာထေးရာလေးများကုိုတွေ့ရသဖြင့် “အော် သူတုို့လည်း
တုို့နဲ့နဲနဲတော့တူပါလား” ဟု မှတ်ချက်ပြုမိသည်။ သုို့သော် မဆုိုစလောက်နေရာအနည်းငယ်လေးမျှသာတွေ့ရသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ဒုတိယမြို့ တော်ဖြစ်သည့် Antwerp မြို့ှတွင်နေထုိုင်သော
ဒကာဦးဇင်မင်းထွန်း ဒကာမဒေါ်ဂျုးဂျူးတုို့မှ သူတို့နေအိမ်တွင်နေ့ဆွမ်းကပ်ကြသည်။
“ ဒီမှာထုိုင်းတွေများတယ်ဘုရား၊ ဒါကြောင့်ငါးပိကတော့ပေါပါတယ်” ဟုဆုိုလေသည်။
နေ့ဆွမ်းစားပြီး၍ မြို့ ထဲသုို့ ဒကာဦးထွန်းအောင် ဒကာဆက်မျိုးဦးနှင့်မိမိတုို့သုံးဦးသား
ဖြစ်၍ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပေ။ ထုိုနေ့သည်ကား လမ်းလည်းသာ
ဆွမ်းဘုန်းလည်းကောင်း လည်ပတ်ရသည်မှာလည်းပီတိဖြစ်ရသဖြင့် မှတ်မှတ်ရရစွဲထင်သောနေ့တနေ့ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
Posted by Wisdom Of Dhamma at Thursday, February 05, 20150comments
ဒိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၅) ဓမ္မနှင့်ညီညွတ်သောနုိုင်ငံသည်ဖွံ့ ဖြိုး၏
နုိုင်ငံများထဲတွင်တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆုိုချင်သည်။ ရှေးဟောင်းပြတုိုက်ရှိသလုို ပန်းချီပြတုိုက်လည်းရှိသည်။ သမုိုင်းပြတုိုက်လည်းရှိသည်။ ကုန်ကုန်ပြောရလျှင်
Sex Museum ပင်ရှိသည်။ မိမိအမြင်အရမူ ပြတိုက်တုို့ရှိခြင်းသည် ပြည်သူတုို့အားအလုပ်အကုိုင်ကုိုဖန်တီးပေးနုိုင်သည့်ပြင်ဝင်ငွေလည်းရစေသည်။ ပြည်သူတုို့အားအသိဥာဏ်တုိုးစေသည်။ အမှန်စင်စစ် ပြတုိုက်ဟူသည် လူသားတုို့အား
အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ဗန်တုို့၏ဖြစ်ကြောင်းစုံလင်ကုိုချိတ်ဆက်ကာအသိပညာပေးသော မဟာပညာဌာနကြီးဖြစ်သည်ဟု ခံယူနားလည်မိသည်။ တနည်းဆုိုသော်
(၁၇. ၁. ၁၅) နေ့တွင်ကား Amstelveen မြို့ နေ ဦးထွန်းအောင် ဒေါ်အေးအေးစုိုး
မိသားစုတုို့၏ဓမ္မဒါန ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့် Utretch မြို့ တွင် မစ္ဇျိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော် စူဠကမ္မဝိဘင်္ဂသုတ်ကုိုအခြေခံ၍ “ ဘာကြောင့်လူတန်းစားကွဲပြားရသလဲ” ဟူသောတရားတော်ကုိုဟောကြားခဲ့သည်။ တရားနာပရိသတ်မှာ (၅၀)
သုံးဆောင်ခံစားလုိုကြသော သဒ္ဓါတရားရွှန်းရွှန်းစုိုသည့်ဓမ္မပရိသတ်ဖြစ်သဖြင့် ဟောကြားသူရောနာကြားသူပါ ဓမ္မအရသာကုိုနှစ်ခြိုက်စွာခံစားခွင့်ရခဲ့သော
အမြဲအမှတ်ရဖွယ်ရာ ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နေ့လည် (၁း၃၀) မိနစ်တွင်ဓမ္မသဘင်ကုိုစတင်၍ ညနေ (၄) နာရီတွင်မှသာပြီးဆုံးခဲ့သဖြင့် တရားဟောချိန်ကြာသည်ဟုဆုိုနုိုင်သော်လည်း ဟောကြားသူရော နာကြားသူပါမည်သူမျှ ဤမျှအထိအချိန်ကြာမြင့်သွားခဲ့ကြောင်း မထင်လိုက်ကြချေ။
နာမည်ကျော်ကြားမှုထက် တရား၏အနှစ်သာရကုိုသာဦးစားပေး၍နာကြားကြသော ဒကာဒကာမတုို့၏သဒ္ဓါတရားနှင့်ဓမ္မ၏သိမ်မွေ့နူးညံ့သောအစွမ်းသတ္တိကြောင့်
နေ့လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလှုရှင် ဦးထွန်းအောင်နှင့်ဒေါ်အေးအေးစုိုးတုို့
မိသားစုသည်လည်း ဓမ္မပီတိနှင့်ဓမ္မသဘင်အောင်မြင်ခြင်းပီတိနှစ်မျိုးလုံးကိုတပြိုင်တည်း နှစ်ခြိုက်စွာခံစားကြရသောနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အချုပ်ကုိုဆုိုရသော် တရားဟောသူ တရားနာသူနှင့်ဓမ္မဒါနအလှုရှင်များအားလုံး နူးညံ့သောဓမ္မနှလုံးသား၏
ထုို့ပြင် ရွှေပြည်ကြီးမှ ခုနစ်ယောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်သည့်
ဒေါက်တာမောင်မောင်သည် ဤ Utretch မြို့ မှ Utretch တက္ကသုိုလ်တွင်
ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး (၁၉ ၅၆) ခုနှစ်တွင် LLD ကုိုရရှိခဲ့သည်ဟု လေ့လာသိရှိရသည်။
(၁၈. ၁. ၁၅) နေ့တွင်ကား ဒကာကုိုထွန်းထွန်းဦး ဒကာမ မဂျူးလီမိသားစုတုို့မှ
ပင့်ဖိတ်သဖြင့် Velsel-zuid ကျေးရွာသုို့ ဆွမ်းဘုန်းပေးကြွရောက်ခဲ့သည်။
ကျေးရွာဆုိုသော်လည်း ရွှေပြည်ကြီးမှ ခရုိုင်မြို့ ကြီးအလား ကျယ်ပြန့်သည်။ သန့်ရှင်းလှပသောရွာကြီးပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိူးပြီးဥရောပနုိုင်ငံတုိ့တွင်ကား
တောကျေးလက်နှင့်မြို့ ပြဟူသည် လူဦးရေအနည်းအများသာကွာခြား၍
အရာရာသည်ဘာမျှမကွဲပြား မခြားနားကြပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အသုံးအဆောင် အစုိုးရ၏လူမှုထောက်ပံ့မှုစနစ် ဆက်သွယ်ရေးမှအစအရာရာသည်တပြေးညီသာဖြစ်သည်။ ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားဟောကြားပြီးသောအခါ အလွန်ကြီးမားသော (ဗမာအခေါ်) သူခုိုးဈေးလည်းသုို့လည်းသွားရောက်ခဲ့သည်။ အဆုိုပါ သူခုိုးဈေးသည်
ထူးခြားသည်မှာ ဗမာပြည်မှဈေးများနှင့်တူနေခြင်းပင်။ ဈေးသည်ကလည်း
သူဆုိုချင်သလောက်ဆုိုသည်၊ ဝယ်သူကလည်း သူရချင်သည့်ဈေးကုိုဆစ်သည်။
ဈေးဆစ်သည့်အတုိုင်းလည်းလျှော့ပေးသည်။ ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူသည် အသံတူဖြစ်ဖို့လွယ်ကူသဖြင့်ဈေးညှိရသည်မှာလွယ်ကူသောဈေးကြီးတခုဖြစ်သည်။
အချို့ ပစ္စည်းများမှာ ဈေးပေါပေါနှင့်အလွန်ကောင်းမှန်းသိသော်လည်း
လမ်းတလျှောက်တွင် သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းပေါ်မှ ရေနံချက်စက်ရုံနှင့်ဆိပ်ကမ်းကပ်ထားသော
ရေနံတင်သင်္ဘောများကုိုတွေ့ရသည်။ ကားလမ်းဘေး၏ဝဲယာတုို့တွင်ကား ဖြောင့်တန်းညီညာသောရေမြှောင်းများဖြင့်ခြံစည်းရိုးကာရံထားသကဲ့သုို့ စီရရီလှပနေသောမြက်ခင်းပြင်များကုိုတွေ့ရသည်။ လမ်းဘေးရှိသစ်ပင်များမှာ
အသုံးတည့်အောင်စီမံခန့်ခွဲနုိုင်ကြသည်ကုိုသတိပြုမိသည်။ “ ဤနုိုင်ငံတုို့ကား
ကင်းဝေးနေသောနုိုင်ငံတုို့ပေတကား…” ဟု မုဒိတာစိတ်ဖြစ်ပွါးရသည်။
မလေးရှားမှဝယ်ယူသုံးစွဲရပြီး လက်ရှိချုပ်ဆုိုထားသောစာချုပ်မှာ (၂၀၂၀) ခုနှစ်တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် နောက်ထပ်စာချုပ်အသစ်
ချုပ်ဆိုနုိုင်ရန်အတွက်မလေးရှားနှင့် ဆွေးနွေးနေသည်ဟုသိရသည်။ နယ်သာလန်နုိုင်ငံကား ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် 6-76 meter နိမ့်သည်။ သောက်သုံးရေအတွက်
ရေချိုမြစ်နှင့်မိုးရေကိုစုသောသီးသန့် ရေချိုကန်ကြီးများသည် အဓိကအားဖြင့်မြို့ ကြီး
ရေကန်ကြီးများတွင်အဆုံးသတ်သည်။ ၎င်းနောက် ထုိုရေကန်ကြီးများမှ
ရေကုိုသောက်သုံးရေအဖြစ် ပြန်လည်သန့်စင်၍အသုံးပြုသည်။ ထုို့ပြင် ပင်လယ်ရေကိုလည်းရေချိုအဖြစ်ကျိုချက်သန့်စင်၍အသုံးပြုသည်ဟုလည်းသိရသည်။
ရွှေပြည်တွင်ကား ရေကုိုဝယ်စရာလည်းမလို ကျိုချက်သန့်စင်စရာလည်းမလုိုဘဲ
လူသားတုို့၏ ကံဥာဏ်ဝီရိယအမွေကောင်းကုို အစုိုးရအဆက်ဆက်
မပျက်မကွက်လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းနှင့်ခံယူခြင်းများရှိခဲ့သဖြင့် ကမ္ဘာဝယ်
လုံခြုံသော ဖွံ့ ဖြိုးသော သိက္ခာရှိသောနုိုင်ငံများအဖြစ် ရပ်တည်နုိုင်ကြလေပြီ။
ဤနုိုင်ငံတုို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်ညီညွတ်သောကြောင့် ဤကဲ့သုို့သောအဆင့်အတန်းကုိုရောက်နေသည်ဟုသုံးသပ်မိသည်။
အဘယ်မှာလျှင်မဖွံ့ ဖြိုးဘဲ ရှိအံ့နည်း..။ မှန်၏။ နုိုင်ငံတခုဆင်းရဲတွင်းနက်နေလျှင်
သုို့မဟုတ် မတရားမှုများလွှမ်းမုိုးနေလျှင် သုို့မဟုတ် တရားဥပဒေစုိုးမုိုးမှုမရှိဘဲ
ပရမ်းပတာဖြစ်နေလျှင် ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်မညီသောကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟု ဧကန်မှတ်ယူထိုက်သည်။ (ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်)
Posted by Wisdom Of Dhamma at Monday, February 02, 20150comments
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၄) တရားဥပဒေသေခြင်းမှာ ဘဝသည်အခါခါ နာရသေရ၏
(၉ .၁.၁၅) နေ့တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ဂျာမဏီနုိုင်ငံတုို့အနီးတွင်ရှိသော Maastricht မြို့ နေ
ဦးတင်သောင်း ဒေါ်တင်တင်ဝင်းမိသားစုနေအိမ်သုို့ကြွရောက်၍ နယ်သာလန်နုိုင်ငံတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် မိမိ၏
မိမိအနေဖြင့်လည်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအမြန်ဖြစ်မြောက်စေရန် အမှန်ဆန္ဒရှိပါသည်။ အမြန်ဖြစ်မြောက်ပါစေဟုလည်း ရင်တွင်းမှဆုတောင်းမေတ္တာ
အခါခါပုို့သဖြစ်သည်။ အဆုိုပါဆွေးနွေးပွဲငယ်လေးတွင် ဂျာမနီနုိုင်ငံဖရန့်ဖွတ်မြို့ တွင် သီးတင်းသုံးသောဦးကုသလသာမိ၊ နယ်သာလန်နုိုင်ငံမှ
ဦးတင်သောင်း ဒေါ်တင်တင်ဝင်း၊ ကုိုဒညလင်း၊ ကုိုမုိုးကျော်နှင့်ဖင်လန်နုိုင်ငံမှ
သာသနာပြုရာဝယ် မိမိနှလုံးသားတွင် ပထမဆုံးသာသနာတည်ဖုို့အရေးကြီးကြောင်းကုို သမုိုင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်များ လက်ရှိပစ္စက္ခအခြေအနေများနှင့်ယှဉ်ထုိုး၍
“ ဘီစီသုံးရာစုတုန်းက အိန္ဒိယတိုက်ကြီးမှာအလွန်တန်ခုိုးထွားခဲ့တဲ့သိရီဓမ္မာသောက
ဘုရင်ကုို ဒကာ/ဒကာမများတုို့သိကြမှာပါ။ အဲဒီဘုရင်ဟာအလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့
အာဏာရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ နူးညံ့သိမ်မွေ့ 
တဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သိမ်မွေ့ညင်သာပြီးထက်မြက်လာခဲ့တယ်။ တနည်းပြောရရင် သာသနာမှာလာရှိတဲ့တရားတွေဟာ သူ့ရဲ့ရင်တွင်းမှာတည်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် တုိုင်းပြည်ကုို ဗြာဟ္မစုိုရ်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်နုိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီခေတ်ကာလရဲ့
သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေါ်လစီတွေဟာ သာသနာတော်ကိုမဏ္ဍိုင်ပြုထားတာမုို့ ခုိုင်ခံ့ပြီးနုိုင်ငံတကာမှာဂုဏ်သိက္ခာတင့်ခဲ့တယ်။ ယနေ့အထိအတုယူ
ရှိနေဆဲဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ နောက်ပီးတော့ စာပေတွေအနုပညာလက်ရာတွေ
လူမှုဖွံ့ဖြိူးရေးတွေ တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးမှအစ အရာရာဟာ
စည်ပင်တုိုးတက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါက ဘီစီသုံးရာစုမှာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တခုကုို
မီးမောင်းထုိုးပြရုံသက်သက်ပါ။ တိတိကျကျပြောရရင် အသောကဘုရင်ဟာ စိတ်နှလုံးနူးညံ့လာတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာတော့ စိတ်နှလုံးနူးညံ့မှုဟာမြင့်မြတ်မှုအဆင့်သုို့ရောက်လာပြီးတော့ပုိုလုို့ခုိုင်မာခဲ့တယ်။
ဆုိုလုိုတာပါ။ အဲဒီစိတ်ထားနဲ့သတ္တိကုို သတိနဲ့ပညာကဖြစ်စေတာပါ။
ဦးဇင်းတုို့မြန်မာနုိုင်ငံအပါအဝင် အာဖဂန်နစ္စတန် တိဘက် ဟိမဝန္တာ
“ယခုအခြေအနေကတော့ ခေတ်အနေနဲ့ကလဲ (၂၁) ရာစုကုိုရောက်နေပြီ။ ဒေသအနေနဲ့
ကလည်း ဥရောပဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုတွေလဲမတူကြဘူး၊
အရှေ့ နဲ့အနောက်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစားအသောက်မှအစရာသီဥတုအဆုံး
အလုံးစုံဟာ မတူညီကြဘူး။ ဒါကြောင့် ဥရောပမှာသာသနာပြုတော့မယ်ဆုိုရင် အရာရာမှာသတိနဲ့ပညာဦးစီးပြီးတော့လုပ်ကုိုင်နုိုင်မှသာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး
အောင်မြင်နုိုင်မယ်။ သတိနဲ့ပညာမဦးစီးဘဲပုထုဇဉ်ပီပီ ပြောဆုိုမိလုပ်မိရင် ခုတ်ရာတခြား ရှရာတလွဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်” ဟု ပဏာမရှင်းပြလုိုက်သည်။ ထုို့နောက်မှ ဖင်လန်နုိုင်ငံတွင်မိမိတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသောအခြေအနေများနှင့်အသိအမြင်များကုို
အကျယ်တဝင့်ပြောပြလုိုက်သည်။ မိမိပြောပြီးသည့်အခါ အားလုံးကဝမ်းသာအားရရှိကြသဖြင့် အဆင်ပြေ၍အေးချမ်းသောကောင်းကျိူးရှိသောကျေနပ်ဖွယ်ရာ တွေ့ဆုံမှုတခုဖြစ်ခဲ့သည်။
အမြင်ကုိုယ်စီဖြင့်ပွင့်လင်းစွာဖလှယ်ကြသည်။ (၁၀.၀၁.၁၅) တွင်
နေ့ဆွမ်းစားပြီးသောအခါ ဆွမ်းအလှုရေစက်ချသည်။ ညနေ (၃း၂၀) မိနစ်တွင်
Maastricht မြို့ မှ Utretch မြို့ သုို့ရထားစီး၍ပြန်လာခဲ့ကြရာ Eindhoven
မြို့ သုို့အရောက်တွင် လှပသေသပ်ပြီးခေတ်သစ်ဗိသုကာလက်ရာတုို့ဖြင့်
ဝင့်ထည်နေသော PSV ဘောလုံးကလပ်၏အသင်းပုိုင်ကွင်းကြီးကုို
ရထားပေါ်မှမြင်ရလေသည်။ Amsterdam မြို့ တွင်ရှိသော Ajax အေဂျက်စ်
(ဒတ်ခ်ျတုို့အသံထွက်မှာ “အာယားစ်” ) ကလာပ်၏အသင်းပုိုင်ကွင်းကြီးကား
ပုို၍ခန့်ညားသည်။ အောင်မြင်မှုအဆင့်ဆင့်၏အရောင်အရှိန်တုို့ဖြင့် ဝင့်ကြွားနေသည့်ဟန်ဆောက်လုပ်ထားသည်။ နယ်သာလန်မှရထားများသည်
ကောင်းမွန်သည်မှန်သော်လည်း ဖင်လန်မှရထားများလောက် တောက်ပ
သွားရင်းပြောပြဖူးသည်။ ဖွံ့ဖြိူးပြီးနုိုင်ငံချင်းတူသော်လည်း မထင်ရှားသော
ဤအပြန်ခရီးဝယ် မှန်အလုံကာထားသောရထားတွဲအတွင်းမှ ဝဲယာပတ်ဝန်းကျင်ကုို
သတိထားကာလုိုက်ပါခဲ့သဖြင့် ကျယ်ပြန့်သောမြက်ခင်းပြင်ကြီးများ ယာခင်းစုိုက်ကွင်းကြီးများကုိုတမျှော်တခေါ်တွေ့ရသည်။ ရံဖန်ရံခါ
သစ်တောများကုိုလည်းတွေ့ရတတ်သေးသည်။ လူဦးရေ (၁၆) သန်းရှိသော
ဤနိုင်ငံသေးသေးလေးတွင် ဤကဲ့သုို့ကျယ်ပြန့်သောယာခင်းများ မြက်ခင်းများ
တွေ့ရသဖြင့်အံ့သြမိသည်။ ဤနယ်သာလန်တွင် မြေယာကုိုမတရားလုယက်ခံရသော
ပူဗျာပွေနေသောပြည်သူတို့၏ငိုရှိုက်သံတုို့ကုိုလည်း မကြားဘူးခဲ့ပါ။ တရားမျှတတည်ငြိမ်သောဥပဒေဖြင့်နုိုင်ငံသားတုို့၏မြေယာပုိုင်ဆုိုင်မှုကုို
ကာကွယ်ပေးထားသည်မှာထင်ရှားလှသည်။ ထုို့ပြင် ယာစုိုက်ခင်းထဲတွင်
ရေအမြဲရှိနေသောရေမြှောင်းများကုိုတွေ့ရသည်။ ထုိုမြှောင်းရေတုို့သည် စီးဆင်းမနေဘဲရေသေများဖြစ်သော်လည်းအမှိုက်သရုိုက်မရှိဘဲသန့်ရှင်း
နေသည်ကုိုသာတွေ့ရသည်။ တောရောမြို့ ပါမကျန်လူအားလုံးသည်ရေမြှောင်းထဲသုို့
ဤနုိုင်ငံမှဤရေမြှောင်းများကုိုမြင်ရသည့်အခါ ရွှေပြည်တွင်မန္တလေးမြို့ အနီးမှ
ခရိုင်မြို့ တမြို့ ကုိုသတိရမိပြန်သည်။ ထုိုမြို့ တွင်ကား ဤရေမြှောင်းထဲမှရေကုိုချိုးသည်၊
သုံးသည်၊ မြှောင်းထဲတွင်ပင်ပန်းကန်ဆေးသည်၊ အဝတ်လျှော်ပြန်သည်၊
တံတွေးထွေးသည်၊ နှပ်ညှစ်သည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများပစ်ချသည်။ အမှိုက်များကိုလည်း
ပစ်ချလုိုက်ပြန်သေးသည်။ ဤမြှောင်းရေကုိုအသုံးပြု၍ပင်သွားတုိုက်လုိုက်သေးသည်။ တခါတရံတွင်ရေစီးရေလာက ခြေမျက်စိလောက်အထိသာရှိသော်လည်း ထုိုဖြေးဖြေးလေးစီးဆင်းနေသောရေလေးကုိုပင်လျှင်မဆင်ခြင်ဘဲ သုံးစွဲကြလျှက်
တွေးရင်းအံ့သြနေမိရသည်။ သုို့သော် မိမိလည်းထုိုရေကုိုပင်သုံးစွဲခဲ့ဖူးပါသည်။
နောက်တခု ထူးထူးခြားခြားသိရသည့်အရာမှာ ဟုိုင်းဝေးလမ်းဖေါက်လုပ်ရန်
ရွှေ့ ခုိုင်းသည်ဟူ၏။ သုို့သော် ပုိုင်ရှင်ကမရွှေ့ ။ သုို့နှင့် “ ဟော်တယ်ကုို
မူလပုံစံလည်းမပျက်တန်ဖုိုးလည်းမလျော့ကျစေဘဲ ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးမည်” ဟုဆွေးနွေးသည့်အခါလည်း ပုိုင်ရှင်ကလက်မခံဘဲငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ထူးဆန်းလေစွ…..။ ၎င်းဟော်တယ်မှာ Amsterdam မြို့ နှင့် Breukelen
မြို့ အကြားတွင်ယခုရှိနေသော Hotel Breukelen ပင်ဖြစ်၍ ပုိုင်ရှင်မှာ
အပြည့်အဝရရှိသောနုိုင်ငံပါတကား….၊ တရားဥပဒေသည်မူလအဓိပ္ဗါယ်အတုိုင်းပင် အသက်ဝင်ရှင်သန်နေပါလား……၊ တစုံတယောက်၏ သုို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ တခုခု၏
သေဆုိုသေ ရှင်ဆုိုရှင်ဖြစ်နေရသည့် သေလုိုက်ရှင်လုိုက်တရားဥပဒေမဟုတ်ပါလား…၊ သဌေး၏ပုိုင်ဆုိုင်မှုသည်ခုိုင်ခံ့လှလေစွတကား….ဟုတွေးရင်း “ရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာများအကြိတ်အခဲအမြဲတည်ပါစေ”ဟူသောရှေးဆရာတော်
များ၏ဆုပေးကုိုသတိရမိသဖြင့် ဤသဌေးသည်ဤရှေးဆရာတော်ကြီးများထံတွင် ကုသုိုလ်ပြုမိခဲ့ဟန်ရှိသည်ဟုလည်းဖြစ်နုိုင်ချေရှိသမျှမှတ်ချက်ပြုမိသည်။
မဟာဓမ္မပါလာဇာတ်တော်တွင်လာရှိသော ဓမ္မော ဟဝေ ရက္ခတိ ဓမ္မစာရိံ၊
ဓမ္မော သုစိဏ္ဏော သုခမာဝဟတိ၊ “တရားဥပဒေကုိုအသက်သွင်းလျှင် တရားဥပဒေကလည်းလူကုိုအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာရှင်သန်စေ၏၊ တရားဥပဒေကုို
အမြဲလေးစားလုိုက်နာလျှင် ထုိုလူမှုအဖွဲ့ အစည်းသည် လုံခြုံ၏၊ ချမ်းသာ၏” ဟူသော ဒေသနာတော်ကုိုလည်းဆင်ခြင်ရင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်မခံထားဘဲ
အမှန်စင်စစ် “တရားဥပဒေသေခြင်းမှာလူ့ဘဝဟာအခါခါနစ်နာရ၊ သေရပါလား”
ဟုလည်း သံဝေဂဥာဏ်ပွါးမိသည်။ ထုိုမှဆက်၍ ရွှေပြည်သုို့စီရရီအတွေးများနှင့်အတူ
“တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ တုို့ပြည် တုို့မြေ၊ များလူခပ်သိမ်း
ငြိမ်းချမ်းစေဖုို့ ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည် တုို့ပြည် တုို့မြေ၊ ပြည်ထောင်စုအမွေ
အမြဲတည်တံ့စေ၊ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ ထိန်းသိမ်းစုို့လေ”ဟူသော
ပြန်လည်ကြားယောင်မိရင်း သီချင်းကပဲလွဲနေသလား၊ ငါကြားမိတာပဲ လွဲနေရော့သလား….တစုံတခုကများလွဲနေရော့သလား…လား….လား….
လားပေါင်းများစွာဖြင့် စဉ်းစားခန်းချဲ့ နေမိခဲ့တော့သည်။
ထုို့ပြင် နယ်သာလန်၏ထူးခြားသောမြင်ကွင်းများ၊ စနစ်ကျသောလူမှုအဖွဲ့ အစည်း၏
လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေပုံများ၊ အတုယူစရာများ တုို့ကုိုရထားပေါ်ဝယ်စိတ်ထဲတွင်
ထင်သမျှစဉ်းစားရင်း ညနေ (၅း၃၀) နာရီခွဲတွင် Utretch မြို့ သုို့ပြန်လည်
ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထုိုမှတဖန် မိမိတည်းခုိုရာ Amstelveen မြို့  ဦးထွန်းအောင်
ဒေါ်အေးအေးစုိုးနေအိမ်သုို့ ည (၇) နာရီတွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Posted by Wisdom Of Dhamma at Tuesday, January 27, 20150comments
“ အရှင်ဘုရား နောက်တခေါက်လာလည်လျှင် မတ်လလောက်မှာအရောက်လာပါ။ အဲဒီလဟာ တနုိုင်ငံလုံးရဲ့နေရာတုိုင်းမှာပန်းတွေနဲ့ဝေပြီးလှပနေပါတယ်။ အဲဒ...
မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး
ဒကာကြီး ဦးဇော်ဝင်း၏ တတိယမေးခွန်းကုိုဖြေဆုိုပေးလုိုက်ပါသည်။ မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး ရှေးရှေးသောအခါကာလဝယ် သက်ဦးဆံပုိုင်ဘုရင်မျ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဇစ်မြစ် ( ၁၀ ) ယသော်ဓရာ၏ အေးချမ်းသောအလွမ်း
ရဟန်းမြတ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည် ဘဝပေါင်း ကုဋေတစ်ထောင်မက သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်အကျိူးငှာ သူတစ်ပါး၏သားမယားအဖြစ် တပည့်တော်မကို...
“ နောင်နှစ်ခါလဲ ဆီးလုို့ကြိူကွယ် မောင်ကြီးလာပါမယ် လာပါမယ်၊ ဒီနှစ်လုိုပဲ ဆီးလုို့ကြိုကွယ် နောင်နှစ်လာပါမယ် လာပါမယ်၊ သာယာေ...
နောက်တခုထူးခြားသည့်အရာမှာ နယ်သာလန်သည်ပြတုိုက်ပေါသော နုိုင်ငံများထဲတွင်တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆုိုချင်သည်။ ရှေးဟောင်းပြတုိုက်ရှိသလုို ...
ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်လူ့အခွင့်အရေး (၉) ဗြဟ္မစိုရ်တရားကို လူ့အခွင့်အရေးဖြင့် ချဉ်းကပ်ခြင်း (က)
သီလမဂ္ဂင်သည် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလွန်ပင်အရေးကြီးကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သီလစောင့်ထိန်းခြင်းသည် မိမိအတွက်ရော သူတပါးအတ...
ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် လူ့အခွင့်အရေး (၈) သီလကို လူ့အခွင့်အရေးဖြင့်ချဉ်းကပ်ခြင်း
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် သို့မဟုတ် ပိဋကတ်သုံးပုံ သို့မဟုတ် နိကာယ်ငါးရပ်ကို အကျဉ်းချုပ်လိုက်သောအခါ ၁။ သ...
ယနေ့ခေတ်ကုို Knowledge Era ပညာခေတ်ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ မှန်၏။ ယနေ့ခေတ်သည် တတ်စရာပညာရပ်များ များပြားလှသည့်နည်းတူ သိစရာပညာများလည်း များ...
ဆက်လက်၍ အေဒီ (၁၃) ရာစုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ရှေးဟောင်းခရစ်ယန်ဘုရားရှိခုိုးကျောင်းကြီးသုို့ သွားရောက်လေ့လာကြသည်။ ဘုရားကျောင်းကြ...
ဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်လူ့အခွင့်အရေး (၁၀) ဗြဟ္မစိုရ်တရားကို လူ့အခွင့်အရေးဖြင့်ချဉ်းကပ်ခြင်း (ခ)
ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးတွင် မေတ္တာအကြောင်းကို အပိုင်း (က)တွင် မိမိစွမ်းနိုင်သမျှစုစည်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခုအပိုင်း (ခ)တွင် ကြွင်းကျန်သည့် ကရုဏာ မုဒိ...
My Philosophy Of Life (1)